“तिम्रो तन” गीत गाउदै आम्ना र सुदिन !! - Enepalese.com
“तिम्रो तन” गीत गाउदै आम्ना र सुदिन !!
इनेप्लिज २०७६ वैशाख ७ गते १८:४५ मा प्रकाशित
भनिन्छ सच्चा प्रेम गर्नेहरुलाई कुनै जात, वर्ग, धर्म र भुगोलको सिमाले छेक्कन सक्दैन । यही युक्तिलाई सार्थक बनाएका छन्, बागलुङ नगरपालिका–१२ एक युवा र पाकिस्तानी एक युवतीले । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत साथीको रुपमा सम्बन्धमा बनाएका नेपाली युवा सुदिन आचार्य र पाकिस्तानी युवती आम्ना सफिक अन्तत् वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन् ।
पोखराको इन्फोमेटिक्स ‘आइटी इञ्जिनीयरिङ’ कलेजमा अध्ययनरत मुस्लिम युवती सफिक र आचार्य ‘मिच्युल’ साथीको सहयोगले आपसमा जोडिएका थिए । स्न २०१५ देखि यूरोपमा रहेका सुदिन फेबवुक मार्फत बनेको ‘प्रेम सम्बन्ध’लाई विवाहमा परिणत गर्न गत पुषमा नेपाल फर्केका थिए । हेर्नुहोस यो भिडियो